Soomaaliya Ma Laga Qaadi doonaa Cunaqabateynta Hubka? FAALLO | SAHAN ONLINE
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa todobaadkan Qaramada Midoobay u gudbisay codsiga ah in la qaado cunaqabteynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya
Bishii Janaayo ee sanadkii 1992dii ayuu Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay dalka Soomaaliya kusoo rogay Qaraarka (Resolution 733) oo cunaqabateyn dhanka hubka ah, xiligaasi oo ay socdeen dagaaladii sokeeye ee Soomaalida.
Cunaqabateyntan ayaa laga khafiifiyey wadanka Soomaaliya sanadkii 2007 si loogu fasaxo hubka ciidamada AMISOM ee gacanta siinaya Dowlada Federaalka, balse xukuumada Soomaaliya ayaa hada dooneysa in gebi ahaan laga qaado cunaqabteyntaasi oo caqabad ku ah in Federaalka Soomaaliya helo hubka culus.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Jamhuuriyada Federaalka Axmed Cawad oo khudbadiisii todobaadkan ee Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay uga hadlay horumarka laga sameeyey xaalada dalka Soomaaliya ayaa sheegay in xiligan la gaaray wakhtigii wadanka Soomaaliya laga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka si loo dhiso ciidamo tayo leh.
Hase yeeshee codsigan ayaa waxa hortaagan su’ aalo badan oo adkeenaya in xiligan la qaado cuno-qabateynta saaran dalka Soomaaliya.
Maaha markii ugu horeysay oo codsi noocaan ah loo gudbiyo Caalamka, xukuumadii Federaalka KMG ee Soomaaliya ee Madaxweyne Shiikh Shariif iyo Raysalwasaare Cumar Cabdirashiid ayaa horey codsi noocaan ah u gudbiyey Beesha Caalamka sanadkii 2010, iyagoo sidoo kale dadaal u galay in xukuumada laga saaro Kumeel Gaarka oo loo aqoonsado dowlad rasmi ah.
Inkastoo lagu guuleystay ugu danbeyntii in sanadkii 2012 – 2013 dowlada Soomaaliya loo aqoonsado xukuumad Federaalka mid ka baxday kumeel gaarka oo fursad cusub u ahayd xukuumadii Madaxweyne Xassan Shiikh oo xiligaa la doortay hadana waxaan weli lagu guuleysan in la qaado cunaqabateynta hubka ee saaran wadanka Soomaaliya.
Caqabadaha hortaagan qaadista Cunaqabateynta:
1- Dhismaha Ciidamada iyo Maleeshiyaadka Beelaha
2- Musuq Maasuqa Soomaalida
3- Al Shabaab
Sanadkii 2013 ayuu Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay si kumeel gaar ah cunaqabateynta hubka fudud uga qaaday Dowlada Soomaaliya, waxaana loo ogolaaday muddo 1 sano ah in ciidamada Federaalka la hubeeyo, balse tijaabadaasi ayaa lagu fashilay in militariga Soomaaliya ku hanto kalsoonida beesha Caalamka.
Xukuumadii Madaxweyne Xassan Shiikh Maxamuud ee xiligaasi ayaa ku guuleysan weyday dhismaha ciidamo Qaran, waxayna ciidamadii xiligaasi ee Federaalka Soomaaliya oo ka kooban maleeshiyaadkii hore ee qabaa’ilka ka qeyb qaateen dagaalo ka dhacay gobalada Shabeelooyinka oo loo adeegsaday hubkii iyo gaadiidkii dowlada Federaalka. [Halkan ka akhriso Warbixin Dagaaladii ay ka qeyb qaateen Ciidamada Federaalka]
Dhismaha Ciidamada [Qabyo Qaran]
Dowlada Federaalka ee xiligan jirta ee hogaaminayaan Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Raysalwasaare Xasan Cali Khayre ayaan wax badan ka duwaneyn tii ka horeysay ee Xasan Shiikh, maadaama aan weli lagu guuleysan in la dhiso ciidamo rasmi ah oo uu leeyahay Qaranka.
Dowlada Federaalka iyo Maamul Gobaleedyada xubnaha ka ah Federaalka ayaa ku heshiiyey qaabka dhismaha Ciidamada cusub ee Qaranka Soomaaliya, waxayna arrimahan uga hadleen shirarkoodii ugu danbeeyey ee ka dhacay Baydhabo (Maajo/May 2018) iyo Brussels (Luulyo/July 2018), balse illaa iyo hada hirgelinta qorshaha dhismaha ciidamada ayaa ah mid “Qabyo” ah.
Musuq Maasuqa Soomaalida
Caqabadaha hortaagan qaadista cunaqabateynta marka laga yimaado inaan la dhisin Ciidamo Qaran oo rasmi ah ayaa waxaa sidoo kale kamid ah musuq maasuqa dowlada Federaalka Soomaaliya oo RAAD xun ku reebay Kalsoonida caalamka ku qabo Muqdisho.
Khafiifintii cunaqabateynta ee halka Sano socotay (2013-2014) ayaa laga dhaxlay in hubkii fududaa ee gacanta loo geliyey ciidamada Federaalka Soomaaliya ee ku sugan Muqdisho keentay in hubkaasi siyaabo khaldan loo adeegsaday oo ay kamid yihiin dagaal beeleedka ka dhacay koonfurta Soomaaliya. Waxaana xogtaasi lagu soo qaatay warbixinadii ay Guddiga u qaabilsan Qaramada Midoobay kasoo saareen dalka Soomaaliya ee sanadihii lasoo dhaafay.
Caqabada sadexaad ee ugu weyn ayaa ah kooxda Al Shabaab oo ah cadowga ugu weyn ee dowlada Federaalka, kuwaasi oo laftooda la sheego inay xiriiryo qarsoodi ah ku dhex leeyihiin laamaha kala duwan ee dowlada.
Qeyb kamid ah hubkii ciidamada Federaalka loogu talo galay ayaa horey loo sheegay in loo gacan geliyey kooxda Al Shabaab, arrintan oo kamid ah shakiga weyn ee Golaha Amaanka ka qabo dalka Soomaaliya.
Farmaajo iyo Khayre
Xukuumada Nabad iyo Nolol oo ay hogaamiyaan Madaxweyne Farmaajo iyo Raysalwasaare Khayre ayaan ku guuleysan inay meesha ka saaraan shakiga Beesha Caalamka ka qabo tayada ciidamada dowlada Federaalka.
Dalka Soomaaliya ayey ka dhaceen weeraro waaweyn intii xukuumadan joogtay oo uu kamid ahaa weerarkii Soobe oo bishan ku beegan tahay sanadguuradii kowaad, weerarkaasi oo ahaa kii ugu weynaa oo noociisa ah oo caalamka ka dhaca tan iyo weerarkii 11-September-2001 ee ka dhacay dalka Maraykanka.
Madaxweyne Farmaajo oo muddo dheer dhex hurday Wasaarada Gaashaandhiga ee Muqdisho ayaan isaguna ku guuleysan inuu isbedal weyn ku sameeyo ciidamada faraha badan ee xukuumada ugu xareesan Muqdisho, kuwaasi oo tayadooda si weyn looga deyriyey.
Illaa iyo hada laguma guuleysan ciidamo Qaran oo la dhiso waxaana weli fashil dhex fadhiya qorshihii (Transition plan) oo ay xukuumada iyo Maamulada gobalada ku heshiiyeen inay ku dhisaan ciidamo gaaraya 18.000 askari oo laga kala keenayo dowlad gobaleedyada.
Halka Raysalwasaare Khayre uu dhisay ciidamo kale oo lagu sheegay kuwa Xasilinta Muqdisho kuwaasi oo laftooda ku guuleysan inay hakiyaan weerarada ka dhacaya Caasimada oo uu kamid ahaa weerarkii lagu qaaday bishii Luulyo (July) Wasaarada Arrimaha Gudaha xarunteeda Muqdisho, kooxdii Al Shabaab ee weerarkaasi geysatay ayaa la sheegay inay ku labisnaayeen dareeskii cusbaa ee ciidamada Xasilinta oo bilo kahor weerarkaasi la hawlgeliyey.
Hadaba codsiga qaadista cunaqabateynta hubka ee xiligan Federaalka Soomaaliya u gudbiyey Qaramada Midoobay ayaa u muuqda inuu yahay mid weli aan xal u helin caqabadahaasi horyaala oo ah kuwo aan si fudud looga gudbi karin.
Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaan weli ku guuleysan xasilinta caasimada oo ah magaalada xarunta u ah oo ay kasii socdaan weerarada kooxda Al Shabaab oo uu ugu danbeeyey kii Shalay lala beegsaday kolonyo ciidamada Midowga Yurub ee kasoo jeeda Talyaaniga ee tababarada siiya militariga Federaalka, weerarkaasi oo muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay xogta kooxda Al Shabaab ku dhex leedahay laamaha amniga ee Muqdisho.